Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विद्युत् प्राधिकरणको नाफा १४९ प्रतिशत – Emountain TV
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १४९ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राधिकरणले खुद मुनाफा सात अर्ब २० करोड रुपियाँ पु¥याएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्राधिकरणको नाफा दुई अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपियाँ थियो ।
निरन्तर घाटामा रहँदै आएको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ घाटामा थियो । त्यसपछिका वर्षमा भने प्राधिकरण निरन्तर नाफामा रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले आव २०७३÷७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ नाफा गरेको थियो । विद्युत् चुहावटमा आएको उल्लेख्य कमी, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार लगायतका कारण नाफा प्रभावकारी रूपमा वृद्धि भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनले पत्रकार सम्मेलनमार्पmत विद्युत् चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गरिएको जानकारी गराउनुभयो । यसअघि यस्तो चुहावट २०.४५ प्रतिशत थियो । आव २०७२÷७३ मा चुहावट प्रतिशत २५.७८ थियो । यसअनुसार चुहावट नियन्त्रण पछिल्लो एक वर्षमै पाँच दशमलव १३ प्रतिशत र तीन वर्षमा १०.४६ प्रतिशतले घटाउन प्राधिकरण सफल देखिएको छ ।
“अब विद्युत्को खपत र आपूर्ति बृहत् रूपमा बढाउने गृहकार्यमा हामी लागेका छाँै,” उहाँले थप्नुभयो, “देशभित्रै विद्युत् विस्तार र बाह्य व्यापारमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने गरी योजना कार्यान्वयन हुँदैछन् । ”
एक वर्षभित्र प्रणालीमा थपिने एक हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासजस्ता अन्य स्रोतलाई विस्थापित गर्ने लगायतका योजनालाई अगाडि बढाइने छ । मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आवमा मात्रै ७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ भने छ हजार पाँच सय नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आगामी मनसुनसम्ममा विद्युत् उत्पादन करिब दोब्बर हुने अवस्थामा उत्पादित बिजुलीको बजारीकरण पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक खपत विस्तार र विदेश निर्यातका लागि नीतिगत तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई हामीले तीव्रता दिएका छाँै,” उहाँले थप्नुभयो, “उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आउने छैन । ”
प्राधिकरणको प्रगति विवरणमा दसक लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका ३८ विभिन्न आयोजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न सकिएको र १३ वटाको पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।